Lixabiso CNC ukujika mveliso zeplastiki kunye nabathengisi | Ouzhan
Ukwenziwa kweplastikhi kubandakanya izinto ezahlukeneyo ezifanelekileyo ezenziwa ngoomatshini, i-nylon (PApolyamide), i-PC (i-polycarbonate), i-ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), i-PMMA (i-plexiglass, i-poly Acrylic methyl ester), i-polytetrafluoroethylene (F-4), i-epoxy (EP). Xa ukhetha izinto zemizobo yoyilo, iiplastikhi ezifanelekileyo zobunjineli kufuneka zikhethwe ngokwemeko yokusetyenziswa kunye neemfuno ezifanayo zeenxalenye zomatshini ze-CNC.
Izinto eziluncedo zeendawo zokujika zeplastiki
-Iindidi zeepropathi zokukhusela umzimba kunye neekhemikhali.
Inkonzo yokujika yeplastiki eyenziwe ngokwezifiso-China Shanghai CNC iplastiki yokujika iindawo zomenzi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, inokuqhubekeka ngokuchanekileyo ngokuchaneka kwe-CNC ukuguqula iinxalenye zeplastiki ngomgangatho ozinzileyo nothembekileyo. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olufanelekileyo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwezahlulo zomatshini wokujika zeplastiki. Ukongeza, i-CNC yokuguqula iimveliso zeplastiki zibonelela ngokungqongqo kwimigangatho esemgangathweni kwaye inokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngexabiso lokukhuphisana ngeplastiki ye-CNC yokujika iimveliso kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Iimpawu zeeplastiki zokujika zeplastiki
Izinto eziluncedo zeNkonzo yokuGuqula iPlastiki ye-Ouzhan
-Ukuchaneka konke kwe-CNC kuguqulwe iimveliso zeplastiki ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Ngokweemizobo okanye iisampulu zokwenza izinto eziguqukayo zeplastiki.
Egqithileyo Elungiselelweyo carbon sentsimbi ukujika iinxalenye izincedisi processing
Okulandelayo: Nasekuqiniseni iinxalenye zobhedu
I-OEM yentsimbi engenasici ejika iindawo ezizenzekelayo